မနေ့ညက ကံစမ်းမဲမပေါက်သူတွေ နောက်ကံစမ်းမဲတွေ ဆက်မျှော်လင့်လို့ရသေးကြောင်း ပြောလာတဲ့ “စမိုင်းလ်” – ျမန္မာသတင္းစံု
Posted on October 23, 2020 Author admin	Comments Off on မနေ့ညက ကံစမ်းမဲမပေါက်သူတွေ နောက်ကံစမ်းမဲတွေ ဆက်မျှော်လင့်လို့ရသေးကြောင်း ပြောလာတဲ့ “စမိုင်းလ်”
စမိုင်းလ်ရဲ့ ကံစမ်းမဲ Live ကိုတော့ ကြည့်ရှုသူပေါင်း တစ်သန်းကျော်ရှိခဲ့ကြသလို ကံစမ်းမဲပေါက်ဖို့ မျှော်လင့်ခဲ့ကြသူတွေလည်း အများကြီးပါ။ မနေ့ကညက Live မှာ ကံစမ်းမဲမပေါက်သွားတဲ့သူတွေကိုတော့ စမိုင်းလ်က စိတ်မလျှော့ကြဖို့နဲ့ နောက်ထပ်ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွေရှိသေးကြောင်း မျှဝေလာပါတယ်။
မနေ့ကကံထူးသူများအားလုံး ဒီနေ့စတင်ဆက်သွယ်ပြီး ငွေများလွှဲပေးနေပါပြီရှင်။ ကံစမ်းမဲမပေါက်သူများလည်း နောက်အမြဲကံစမ်းမဲတွေပြုလုပ်အုန်းမှာဖြစ်လို့ နောက်အခေါက်တွေမှာပေါက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ အားလုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ ဆိုပြီး ရေးသားမျှဝေလာပါတယ်။
နောက်ထပ်ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွေအနေနဲ့ မနေ့က (၂၂) ရက်နေ့ည ဆယ်နာရီမှ ဒီနေ့(၂၃) ရက်နေ့ည (၁၀)နာရီ (၂၄) နာရီအတွင်းမှာ စမိုင်းလ်အွန်လိုင်းရုပ်ရှင်ရုံကနေ ဂယက်တွေပါဟယ် ဇာတ်ကားကြည့်သူတွေထဲက တစ်ယောက်ကို သုံးသိန်းဆုမဲဖောက်ပေးသွားမှာပါ။
ဒါ့အပြင် ဇာတ်ကားကြည့်ရှုသူတွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကို သိမ်းထားပြီး လာမယ့် (၂၀၂၁) ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်နေ့မှာ သိန်း(၃၀)၊သိန်း(၂၀)၊ (၁၀) သိန်း ဆိုပြီး ဆုမဲတွေဖောက်ပေးသွားမှာမို့ မနေ့ညက မဲမပေါက်ခဲ့သူတွေ စိတ်မပျက်ဘဲ မျှော်လင့်လို့ရသေးကြောင်း မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ပရိသတ်တွေအတွက် မကြာခဏဆိုသလို ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွေနဲ့ လက်ဆောင်တွေပေးနေသူ စမိုင်းလ်ကတော့ မနေ့ကညကလည်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုပြည့်မောင်ရဲ့မွေးနေ့ပါတီလေးအနေနဲ့ Facebook Live လွှင့်ပြီး ဂိမ်းတွေကစားခဲ့တဲ့အပြင် တစ်သိန်းဆု ဆယ်ဆု၊ တစ်သိန်းခွဲတန် Gift Box ဆယ်ခုနဲ့ ဂဏန်းခန့်မှန်းခိုင်းပြီး ဆုချငွေ ဆယ်သိန်းတို့ကို မဲဖောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
စမိုင်းလ်ရဲ့ ကံစမ်းမဲ Live ကိုတော့ ကြည့်ရှုသူပေါင်း တစ်သန်းကျော်ရှိခဲ့ကြသလို ကံစမ်းမဲပေါက်ဖို့ မျှော်လင့်ခဲ့ကြသူတွေလည်း အများကြီးပါ။ မနေ့ကညက Live မှာ ကံစမ်းမဲမပေါက်သွားတဲ့သူတွေကိုတော့ စမိုင်းလ်က စိတ်မလျှော့ကြဖို့နဲ့ နောက်ထပ်ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွေရှိသေးကြောင်း မျှဝေလာပါတယ်။
နောက်ထပ်ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွေအနေနဲ့ မနေ့က (၂၂) ရက်နေ့ည ဆယ်နာရီမှ ဒီနေ့(၂၃) ရက်နေ့ည (၁၀)နာရီ (၂၄) နာရီအတွင်းမှာ စမိုင်းလ်အွန်လိုင်းရုပ်ရှင်ရုံကနေ ဂယက်တွေပါဟယ် ဇာတ်ကားကြည့်သူတွေထဲက တစ်ယောက်ကို သုံးသိန်းဆုမဲဖောက်ပေးသွားမှာပါ။
ဒါ့အပြင် ဇာတ်ကားကြည့်ရှုသူတွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကို သိမ်းထားပြီး လာမယ့် (၂၀၂၁) ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်နေ့မှာ သိန်း(၃၀)၊သိန်း(၂၀)၊ (၁၀) သိန်း ဆိုပြီး ဆုမဲတွေဖောက်ပေးသွားမှာမို့ မနေ့ညက မဲမပေါက်ခဲ့သူတွေ စိတ်မပျက်ဘဲ မျှော်လင့်လို့ရသေးကြောင်း မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
(ရုပ္သံဖိုင္ကို ေအာက္တြင္ ၾကည့္ရႈပါရန္) မင္းသား ေနမ်ိဳးေအာင္ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ အႏုပညာသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ႐ုပ္ရွင္နဲ႔ ဗီဒီယိုဇာတ္ကားေတြမ်ားစြာကို ႐ိုက္ကူးခဲ့သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနမ်ိဳးေအာင္က အသက္အ႐ြယ္တစ္ခု ေရာက္ရွိလာခ်ိန္မွာေတာ့ အႏုပညာလုပ္ငန္းေတြထက္ မိသားစုနဲ႔အတူတူ အခ်ိန္ေတြ ကုန္ဆုံးေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္သတၱပတ္အတြင္းမွာေတာ့ ေနမ်ိဳးေအာင္က “ေခတ္ဝန္ကိုထမ္း ေခတ္လမ္းကိုေလွ်ာက္” ဆိုတဲ့ ဇာတ္လမ္းတိုေလးမွာ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ထိုဇာတ္လမ္းရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ “သာကူး” လို႔ ေခါင္းစဥ္တပ္ ေဝဖန္မႈတစ္ခ်ိဳ႕ရွိခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုကိစၥနဲ႔ ပက္သတ္ၿပီး ေနမ်ိဳးေအာင္က “အႏုပညာသမားအႏုပညာလုပ္တာ ဘာမွားလို႔ဝိုင္းဆဲတာလဲမသိဘူး။ သာကူးရေအာင္လည္းဘယ္သူမွတစ္ျပားတစ္က်ပ္လာမေပးဘူး။ ႏွစ္တိုင္းတပ္မေတာ္ကား႐ိုက္တယ္။ NLD ကတစ္ေယာက္မွလာမဆဲဘူး။ NLD ကားခုတစ္ခါပဲ႐ိုက္ဘူးတယ္။ အားလုံးဝိုင္းဆဲၾကတယ္။ အဲ့တာဘာျဖစ္လို႔လဲနားမလည္.. ကြၽန္ေတာ့္အေဖက စစ္သား ၇ လပိုင္းကမွေသသြားတာ ညီ ၂ ေယာက္ကခုလက္ရွိစစ္တပ္ထဲမွာပါဗ်” ဆိုၿပီး […]
ထက်ထက်ရဲ့ Liveမှာသိန်းရာကျော်တန်လက်ဝတ်ရတနာတွေကို ဝယ်ယူအားပေးခဲ့ကြတဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း၊ နီနီခင်ဇော်နဲ့ စိုးပြည့်သဇင် (ရုပ်သံ)
(ရုပ္သံဖိုင္ကို ေအာက္တြင္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္) ပရိသတ္ႀကီးေရ…. တစ္ခတ္တခါက ေၾကာ္ျငာမင္းသမီးေလးလို႔တင္စားရေလာက္ေအာင္ကို နာမည္ေက်ာ္ခဲ့တဲ့ မင္းသမီးထက္ထက္မိုးဦးကိုသိၾကမယ္ထင္ပါတယ္ေနာ္။ သူမဟာသ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္းမွာလည္း ထူးခြၽန္တဲ့သူျဖစ္တာေၾကာင့္ ပန္းသခင္႐ုပ္ရွင္ကားႀကီးျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးဇာတ္ေဆာင္ဆုတစ္ႀကိမ္၊ သမီးမိုက္႐ုပ္ရွင္ကားႀကီးျဖင့္လည္း ေနာက္ထပ္အမ်ိဳးသမီးဇာတ္ေဆာင္ဆုႀကီးကိုလည္း ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ထက္ထက္မိုးဦးကို ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာထဲက ေၾကာ္ျငာမင္းသမီးလို႔တင္စားေခၚေဝၚခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီးေတာ့ အခုဆိုရင္လည္းထက္ထက္ဟာ အႏုပညာေလာကထဲကိုတေက်ာ့ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ေၾကာ္ျငာမင္းသမီးဂုဏ္ကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္တာကိုလည္းေတြ႕ရပါတယ္။ အဲ့ဒါက‌ေတာ့ မထက္ဟာ Live လႊင့္‌ၿပီးေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြကို ေရာင္းခ်ေပးေနတာလည္းျဖစ္ၿပီး မထက္ေရာင္းသမွ်ကိုလည္း ပရိသတ္ေတြက သည္းသည္းလႈပ္ဝန္းရံေပးၾကတဲ့အျပင္ တစ္ခဲနက္ ဝယ္ယူအားေပးေနၾကတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္လည္း ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း၊ နီနီခင္ေဇာ္နဲ႔ စိုးျပည့္သဇင္တို႔ဟာ မထက္ရဲ႕ Liveမွာ တန္ဖိုးႀကီးေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြကို ဝယ္ယူအားေပးေနၾကတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ မထက္ကလည္း ေစတနာပါပါနဲ႔လိုက္ဖက္မဲ့ပစၥည္းေတြကို ေသခ်ာေလးေ႐ြးခ်ယ္ေပးတဲ့အျပင္ ေဈးေလးေတြဆစ္‌ေပးၿပီး ေရာင္းခ်ေပးတာလည္းေတြ႕ရပါတယ္။ ကဲ…..ပရိသတ္ေတြအတြက္ျပန္လည္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ (Unicode) ထက်ထက်ရဲ့ Liveမှာသိန်းရာကျော်တန်လက်ဝတ်ရတနာတွေကို ဝယ်ယူအားပေးခဲ့ကြတဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း၊နီနီခင်ဇော်နဲ့ စိုးပြည့်သဇင် ပရိသတ်ကြီးရေ…. တစ်ခတ်တခါက ကြော်ငြာမင်းသမီးလေးလို့တင်စားရလောက်အောင်ကို […]
စိတ်ပူနေကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ဦးကျော်သူနဲ့ သူ့ရဲ့ လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပြောပြလာတဲ့ “ထွန်းကိုကို”
မထက်နဲ့မိသားစုဘဝလေး ပြန်ပေါင်းစည်းဖို့ လာပြောတဲ့သူကို ပြတ်ပြတ်သားသားတုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ စိုင်းလွှမ်း